Nagarik News - सुन्दरी कारखाना
भेनेजुएलाले आजका मितिसम्म छपटक 'मिस वर्ल्ड', सात पटक 'मिस युनिभर्स', छपटक 'मिस इन्टरनेसनल' र दुईपटक 'मिस अर्थ'को ताज हासिल गरिसकेको छ। यसलाई भेनेजुएलाका जनताले राष्ट्रिय गौरवको विषय बनाएका छन्। तर, सुन्दरी उत्पादन गर्ने ध्याउन्नमा भेनेजुएला बाहिरी आवरणको सुन्दरताप्रति बढी समर्पित हुँदै गएको र यसले त्यहाँका बालिका तथा किशोरीहरूको शरीरदेखि मनोविज्ञानसम्मलाई दूषित र रोगी बनाइरहेको तथ्यबारे भने धेरै कम कुरा मात्र बाहिर आएका छन्।
भेनेजुएलाका बालबालिकाले सानैदेखि भविष्यमा नामी मोडल हुने र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय 'ब्युटी क्विन'को ताज पहिरिएर नाम र दाम कमाउने अभिलाषा राख्ने गरेका छन्। उनीहरूको यस्तो अभिलाषाप्रति अभिभावकहरूले मञ्जुरी जनाउने मात्र होइन, यसका निम्ति उनीहरूलाई तयार बनाउन अग्रसरतासमेत लिने गरेका छन्। यस्तो अग्रसरताका कारण त्यहाँका हजारौँ बालिकाको शरीरमा महिनावारी सुरु हुनुअगावैदेखि हार्मोन 'इन्जेक्ट' गर्न थालिन्छ। साथै, कस्मेटिक सर्जरीमार्फत उनीहरूको सुन्दरता मर्मत गर्ने गरिन्छ। सुन्दर बन्ने र बनाउने धुनमा त्यहाँका बालिक तथा किशोरीहरूको शरीरमाथि हुने 'एक्सपेरिमेन्ट'को कथा हाम्रोजस्तो देशका मानिसलाई निर्मम र अपत्यारिलो लाग्ने गर्छ।
किशोरवय सुरु नभईकन भेनेजुएलाका बालिकाहरूमाथि कस्मेटिक सर्जरी गराइन्छ। १२ वर्षको उमेरदेखि हिप पोटिलो बनाउन, नाक घुम्रेकोजस्तो नौलो र आकर्षक बनाउन सर्जरी गरिन्छ। सर्जरी गर्न बालिकाका अभिभावकले समेत अग्रसरता लिने गर्छन्। किनकि, भेनेजुएलाका प्रत्येक बालिकालाई भोलि गएर 'ब्युटी क्विन' बन्नु छ र हरेक छोरीका आमालाई 'ब्युटी क्विन'की आमा भनेर समाजमा प्रतिष्ठित बन्नु छ।
'मिस वर्ल्ड' र 'मिस युनिभर्स'जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त सुन्दरी प्रतियोगिताका ताज बारम्बार भित्र्याइरहने भेनेजुएलाका हरेकजसो स्त्रीलाई यस्ताखाले सुन्दरी प्रतियोगितामा सरिक हुने रहर हुन्छ। यसका लागि उनीहरूलाई सानैदेखि तयार पार्ने काम सुरु हुन्छ। स्लिम बन्न १६ वर्षको उमेरमै त्यहाँका किशोरीले आन्द्राको एउटा भागलाई शल्यक्रियामार्फत काटेर मिल्काउने गरेको पाइएको छ, जसले गर्दा खाएको कुरा राम्रोसँग नपचीकन निकास हुन्छ र जीउ लाग्न पाउँदैन। यसो गर्दा स्लिम भइरहने र सुन्दरीको ताज पहिरिने सम्भावना बढ्न पुग्छ।
जीउ लाग्न नपाओस् भनेर त्यहाँका किशोरी र युवतीले अपनाउने काहालीलाग्दा तरिका अरू पनि छन्। जस्तो कि, ठोस चिज खान नसकियोस् र जीउ नलागोस् भनेर कतिपयले जिब्रोमा प्लास्टिकको जाली जडान गर्ने गर्छन्। यसरी जिब्रोमा जाली जडान गर्दा ठोस खाद्यवस्तु खाँदा मुख असाध्यै दुख्ने गर्छ, जसले गर्दा उनीहरू तरल खाद्य पदार्थ मात्र खान बाध्य हुन्छन् र मोटाएर सुन्दरता 'गुम्ने' जोखिम हुँदैन। कम्मर र हिपमा मासु र बोसो नथुप्रियोस्, बरु यो अझ सुडौल र आकर्षक होस् भनेर कम्मरमा प्लास्टर गराउने किशोरी तथा युवती पनि भेनेजुएलामा प्रशस्त पाइन्छन्। त्यस्तो प्लास्टर, जुन हात अथवा खुट्टा भाँच्चिएको बेला लगाइन्छ।
कतिपय अभिभावकले सुन्दरीको ताज आफ्नो छोरीको हातबाट भविष्यमा नउम्कियोस् भन्नका लागि छोरीको महिनावारी सुरु हुनुअगावै उनीहरूको शरीरमा हार्मोन 'इन्जेक्ट' गरिदिनेसम्म गर्छन्। यसो गर्दा महिनावारी सुरु हुने अवधि पर धकेलिन्छ र बालिकाहरू अग्लो हुने अवधि बढी प्राप्त हुन्छ। अग्लो युवतीलाई सुन्दरी उत्पादन गर्ने र 'सर्टिफाई' गर्ने कारखानाले प्राथमिकता दिने भएकाले छोरीको उचाइ महिनावारीले छेक्न नसकोस् भन्ने चाहना धेरै भेनेजुएलाली आमामा हुन्छ।
यस्ता प्रशिक्षण केन्द्रले फेसन उद्योगले तय गरेको मापदण्डअनुरूप सुन्दर बन्न बालबालिका तथा अभिभावकलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहयोग गर्ने गर्छन्। यस्ता केन्द्रमा लाखौँ बालिका, किशोरी तथा युवतीहरू भविष्यमा 'ब्युटी क्विन' बन्ने सपना बोकेर भर्ना हुन्छन् र आफ्नो सुन्दरतालाई 'परिष्कार' गर्दै जान्छन्। अभिभावकहरूले चार वर्षभन्दा कम उमेरका छोरीलाई पनि यस्ता केन्द्रमा भर्ना गरिदिने गरेका छन्।
'ब्युटी क्विन' बनेपछि नाम त कमाइन्छ नै, दाम पनि प्रशस्तै कमाइन्छ। यही दामको लोभले समेत सुन्दरता उत्पादन गर्ने उद्योगप्रति भेनेजुएलाका स्त्री र उनीहरूका अभिभावकलाई आकर्षित गर्ने गरेको छ।
त्यहाँका धेरै अभिभावकले छोरीको 'ब्युटी क्विन' उपाधिलाई गरिबीबाट सम्पूर्ण परिवारलाई मुक्त गर्ने हतियारका रूपमा हेर्ने गरेका छन्। त्यही भएर छोरीलाई सुन्दर बनाउन उनीहरू जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन, उनीहरूलाई जस्तोसुकै महँगो प्रशिक्षण केन्द्रमा भर्ना गराउन र उनीहरूको शरीरमा जस्तोसुकै महँगो शल्यक्रिया गराउन पनि तयार हुन्छन्। यसो गर्दा लाग्ने खर्चले पूरै परिवार ऋणमा डुब्छ भने पनि त्यो उनीहरूलाई स्वीकार्य हुन्छ।
हालसालै भेनेजुएलामा १२ वर्ष पुग्नुअगावै बालिकाको हिपमा लिक्विड सिलिकन इन्जेक्सन लगाएर यसलाई भविष्यमा पोटिलो र आकर्षक बनाउने प्रयासले निम्त्याउनसक्ने अप्रिय परिणामबारे सचेतना जगाउने कार्यक्रम सुरु भएको छ। 'नो टू बायोपोलिमेयर्स, एस टू लाइफ फाउन्डेसन' नामक संस्थाले यस्तो अभियान सुरु गरेको हो। मेरी पर्डोमो नाम गरेकी युवती यो अभियानकी जननी हुन्, जसले किशोरवयमा हिपमा लिक्विड सिलिकन इन्जेक्ट गरेकी थिइन् र यही कारणले गर्दा अभियान सुरु भएपछि उनको निधन भएको थियो।
सोही अभियानमा संलग्न मारिया टि्रनिड्याड भन्छिन्, 'भेनेजुएलामा हरेक केटीले फेसन सोमा ताज पहिरिने सपना बुनेका हुन्छन्। ताज पहिरिएका स्त्रीलाई यहाँ पर्फेक्ट स्त्री मानिन्छ। जब तपाईं यस्तो देशमा बस्नुहुन्छ, जहाँ बलियो कार्यक्षमता र उत्तम पढाइ भएका महिलाको भन्दा शारीरिक रूपमा सुन्दर युवतीको व्यावसायिक जीवनको सम्भावना उज्ज्वल हुनछ, त्यस्तो देशमा सुन्दरताभन्दा ठूलो कुरा अरू केही पनि छैन भन्ने मान्यता आत्मसात् गर्न तपाईं बाध्य बन्नुहुन्छ।'
सुन्दरी प्रतियोगितामध्येको सर्वाधिक महŒवपूर्ण मानिने 'मिस वर्ल्ड'को भर्खरै सम्पन्न फाइनल सुरु हुनुभन्दा एक साताअघि भेनेजुएलाको एउटा प्रशिक्षण केन्द्रको अवलोकन गर्दा त्यहाँ प्रशिक्षार्थीहरूलाई कसरी क्याटवाक गर्ने, अग्लो हिल भएको जुत्ता लगाएर कसरी हिँड्ने, हाउभाउ र शब्द उच्चारण कसरी गर्नेजस्ता कुरा सिकाउने काम भइरहेको थियो। साथै स्तन, कम्मर र तिघ्रालाई ९०–६०–९० सेन्टिमिटरको आदर्श आकारमा ढाल्ने तरिका सिकाउने काम पनि भइरहेको थियो।
त्यस प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक एलेक्जेन्डर भेलसक्विजका अनुसार भर्ना भएका अधिकांश बालिका, किशोरी तथा युवती प्रतिमहिना ५० डलरको आसपासमा कमाइ गर्ने मध्य अथवा निम्न परिवारका सदस्य हुन्छन्। प्रशिक्षण केन्द्रले हरेक प्रक्षिार्थीबाट प्रतिमहिना १० डलर असुल्ने गर्छ। पहिरन, मेकअप र फेसन सोका लागि हुने अन्य खर्च सबै जोड्दा एकजना प्रशिक्षार्थीले प्रतिमहिना करिब २५ डलर खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। 'भोलि 'ब्युटी क्विन' बनेर छोरीले परिवारलाई गरिबीको दलदलबाट बाहिर निकाल्छे भन्ने आश सबै अभिभावकले गरेका हुन्छन्। मिस भेनेजुएला हुन सके पैसा र ख्याति कमाइन्छ र रातारात सेलिब्रिटी भइन्छ भन्ने लालसा प्रशिक्षार्थीमा हुने गर्छ,' उनी भन्छन्।
प्रशिक्षण केन्द्रमा भर्ना भएकाहरूको क्षमता र सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर उनीहरूलाई विभिन्न समूहमा विभाजित गर्ने गरिएको प्रशिक्षण केन्द्रका निर्देशक भेलसक्विज बताउँछन्। ब्युटी क्विन हुने सम्भावना भएकाहरूलाई 'टप' र 'मिनी टप' समूहमा राखेर प्रशिक्षण दिने गरिन्छ। 'यदि १३ अथवा १४ वर्षको उमेरमा उनीहरू ५ फिट ६ इन्च अग्ला छन्, दुब्लापातला छन्, हेर्दा सलक्क परेका आकर्षक छन् भने त्यस्ता प्रशिक्षार्थीमा सम्भावना बढी छ भन्ने निष्कर्ष हामी निकाल्छौँ,' उनी भन्छन्, 'त्यस्तालाई 'टप' र 'मिनी टप' समूहमा राखेर प्रशिक्षण दिने गर्छौं।'
उनका अनसार स्तन प्रत्यारोपण गर्नमिल्ने औसत उमेर भनेको १६ वर्ष हो। 'ब्युटी क्विन बन्ने हो भने स्तन धेरै ठूलो र चौडा हुनु हुँदैन। यो कसिलो र पोटिलो हुनुपर्छ। विभिन्न सुन्दरी प्रतियोगिताले भिन्न आकारका स्तनलाई मानक बनाएका हुन्छन्। र, कुन प्रतयोगिताका लागि आफूलाई तयार बनाउने हो, त्यसले तोकेको मानकबमोजिमको स्तन बनाउने गरी सर्जरी गर्ने गरिन्छ,' उनी भन्छन्।
किशोरी र उनीहरूका अभिभावक दुवैले यस्तोखालका शल्यक्रियाको चाहना राख्ने गरेको उनी बताउँछन्। 'अभिभावकहरू चाँडै नतिजा चाहन्छन्। यसका लागि शल्यक्रिया आवश्यक छ भन्ने उनीहरूको मान्यता छ,' उनी भन्छन्।
'हाम्रो केन्द्रमा भएकी एउटी नौ वर्षकी बालिकालाई यस्तै हार्मोनको इन्जेक्सन लगाइएको छ। यसले गर्दा महिनावारी ढिलो सुरु हुन्छ। यसबीचमा उनीहरू अझ अग्लो हुने सम्भावना रहन्छ,' उनले भने।
भेलसक्विज भेनेजुएलालाई सुन्दरीहरूको देश मान्न कदापि तयार छैनन्। 'यो सबैभन्दा सुन्दरी पाइने देश होइन, तर यहाँ कसरी सुन्दर र पर्फेक्ट स्त्री उत्पादन गर्ने भन्ने ज्ञान छ। त्यही भएर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सुन्दरी प्रतियोगितामा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकेका छौँ,' उनी सगौरव सुनाउँछन्।
उनको प्रशिक्षण केन्द्रमा क्याटवाक सिकाउने प्रशिक्षक ग्याब्रियल रोजो प्रशिक्षार्थीहरूलाई निर्देशन दिइरहेका हुन्छन्, 'टाउको माथि पार, अडियन्ससँग आई कन्ट्याक्ट गर, सुरुमा देब्रेेतिर हेर अनि दाहिनेतिर।' प्रशिक्षार्थीहरू उनले भनेबमोजिम गरिरहेका हुन्छन्।
केही दिनअघि राजधानी काराकसमा क्रिसमसको अवसरमा स्थानीय स्तरको एउटा सुन्दरी प्रतियोगिता भएको थियो। त्यहाँ अभिभावकहरू आफ्ना छोरीको प्रस्तुति हेर्न दर्शकदीर्घाको पंक्तिमा व्यग्र भएर बसिरहेका थिए। यस्ता स–साना सुन्दरी प्रतियोगिताका सहभागीमध्येबाटै 'ब्युटी एजेन्ट'ले सम्भावना बोकेका मोडलहरूको चुनाउ गर्ने भएकाले अभिभावक र छोरी दुवैले यस्ता स्थानीयस्तरका सुन्दरी प्रतियोगितालाई पनि प्राथमिकता दिएका हुन्छन्।
ब्रुनो कालडाइरन भेनेजुएलाको 'सुन्दरता उद्योग'का एक नामी उद्यमी हुन्। उनको संस्थाले मिस भेनेजुएलाजस्ता लोकप्रिय ब्युटी कन्टेस्ट आयोजना गर्ने गर्छ। सुन्दरता उद्योगले स्त्रीमा हुने कमीकमजोरी कस्मेटिक सर्जरीमार्फत 'करेक्ट' गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको उनी बिनाहिचकिचाहट बताउँछन्।
'एकैखालको अनुहार र जीउडाल भयो भने काम लाग्दैन। सुन्दरी प्रतियोगितामा विजयी हुने खालको अनुहार र जीउडाल विशिष्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले त्यस्तै खालको अनुहार, जीउडाल निर्माण गर्नुपर्छ। यदि कुनै यवतीको पेट चेप्टो खालको छैन भने उनीहरूले लिपोसक्सन नामक सर्जरी गरेर यसलाई सही आकारमा ल्याउन सक्छन्। हल्का घुमि्रएको जस्तो नाक छैन भने नाकको सर्जरी गराउन सक्छन्। कपाल असाध्यै बाक्लो छ भने अतिरिक्त कपाल रोप्न सक्छन्। दाँत त्यति राम्रो छैन भने मर्मतसम्भार गर्न अथवा नक्कली लगाउन सक्छन्,' उनी भन्छन्।
ठूला सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिने भेनेजुएली युवतीमध्ये प्रायः ले प्लास्टिक सर्जरी गर्ने गरेको उनी बताउँछन्। 'करिब आधा जतिले नक्कली कपाल लगाएका हुन्छन्। यो ठगी होइन। बरु यो विजयी हुने मानसिकताको उपज हो,' उनको भनाइ छ।
कास्की, पुम्दीभुम्दीकी चाँदनी बराल र कलिम शेख प्रेममा थिए। डेढ वर्षसम्म चलेको उनीहरूको प्रेम शारीरिक सम्बन्धसम्म पुग्यो। बिस्तारै कलिमलाई चाँदनीप्रति वितृष्णा जाग्न थाल्यो। उनीसँगको सम्बन्धबारे अरूले थाहा पाउलान् भन्ने पिर...
सेतो पर्दा – पात्रको जात खोइ?
सयभन्दा बढी फिल्ममा हिरो बने होलान् राजेश हमाल। उनले खेलेका दर्जनौँ फिल्म सुपरहिट भए। धेरै दर्शकका नजरमा उनी रोल मोडल छन्। धेरैले उनको हेयर स्टाइल नक्कल गरेको पाइन्छ। तर, फिल्महरूमा...
हामी रहरले अराजक बनेका होइनौँ : कवि हाङयुग अज्ञात
कवि हाङयुग अज्ञात पचासको दशकको उत्तरार्धदेखि नेपाली कवितामा प्रवेश गरेका प्रयोगशील कवि हुन्। राजन मुकारुङ, उपेन्द्र सुब्बा र उनी मिलेर नश्लबोधसहितका प्रयोगात्मक कविता लेखनलाई नेपाली साहित्यमा गति दिए। अज्ञातले मूलतः...
प्रेमको पवित्रता, उच्चता र महानतामाथि यति धेरै लेखिएका र बोलिएका छन् कि अब यसबारे केही भन्न सायदै आवश्यक छ । तर, विडम्बना के छ भने प्रेमको खाँट्टी प्रतीक गरिबको झुपडी...
बसाइ हङकङमा, विकास धरानमा
• धरानको विकास कार्य किन पछि पर्दै छ? • घण्टाघरको व्यवस्थापन कसले हेर्दै छ? • खानेपानीको विषयमा किन त्यस्तो विवाद चलेको? धरान–८ समाज, हङकङमा आयोजना भएको धरानको विकाससम्बन्धी अन्तर्क्रियामा यस्तै प्रश्न उठे।